Guddiga dhismaha wadada Boosaaso oo dib u helay xoriyadoodii
July 23, 2019 - Written by Editor
Boosaaso:-Maxkamada Darajada koowaad ee magaaladda Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari oo maanta la horgeeyey 4 xubnood ee ka tirsanaa Guddiga dhismaha wadada Boosaaso oo mudo dhowr cisho ah ku xirnaa saldhiga bartamaha ee magaaladda si sharci daro ah.
Maxkamada Darajada koowaad ee magaaladda Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari oo dhagaystay dacwada ayaa go’aamisay in gudiga la sii daayo ka dib markii wax danbi ah lagu waayey wallow saxaafaddu ay dibad joog ka ahayd.
Guddiga dhismaha wadada Boosaaso oo saxaafadda la hadlay markii la sii daayey ayaa waxaa ay bogaadiyeen dadweynaha Soomaaliyeed sidda wada jirka ah ee ay uga xumaadeen xariga haldoorka iyo culimada oo howl weyn u hayey shacabkooda.
Gudoomiyaha gudiga Guddiga dhismaha wadada Boosaaso Sh. Maxamed Macalin ayaa ugu baaqay umada Soomaaliyeed wada jir iyo midnimo in ay wax u wada qabsadaan wixii siyaasada ah oo la isku khilaafsan yahay oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada in laga hishiiyo.
Dhinac kale Guddiga dhismaha wadada Boosaaso ayaa xusay in ay sii wadi doonaan shaqada wanaagsan oo ay u hayeen shacabkooda iyagoo ugu baaqay in lagala shaqeeyo in wax laga qabto kaabayaasha dhaqaalaha iyo weliba dalka horumarkiisa.
226,758 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress